I-UserVoice: Impendulo, Isicelo Sesici kanye nokulandela umkhondo kwe-Bug Kwenziwe Kulula! | Martech Zone
Abantu abaku I-UserVoice besimatasa sakha futhi sihlola amathuluzi amasha ukukusiza ukuthi ubandakanye abasebenzisi bakho, uthole okungcono, impendulo eqhutshwa yidatha, futhi unikeze ukusekelwa okungcono kunanini ngaphambili. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule bebehlola amanye ala mathuluzi ngaphakathi kwamakhonsoli wabaphathi bamakhasimende abo e-UserVoice, kufaka phakathi amawijethi abo amasha we-Satisfaction nama-SmartVote, kanye nefomu lokuxhumana elisha, elilula. Namuhla, benza la mathuluzi amasha atholakale kuwo wonke umuntu!
Hlangana newijethi yesimanje
Iwijethi ecatshangelwe ngokuphelele inikezela ngesipiliyoni esibanzi, sangaphakathi nohlelo kumakhasimende akho ukuthola usizo abaludingayo nokuthi wena (osebenzayo) ucele impendulo oyidingayo. Ifaka i-SmartVote ™, Izilinganiso Zokweneliseka, kanye nokugeleza kwezimpendulo ezisheshayo okuthuthukile kwefomu lokuxhumana.
Imininingwane yomsebenzisi ikuvumela ukuthi uthole ukuqonda okwengeziwe kubo bonke abasebenzisi bakho - hhayi labo abakunikeza impendulo ethile noma bahambise amathikithi. Isegmenti bese wehlisela phansi izici ezithile zomsebenzisi, kufaka phakathi izinhlobo zomsebenzisi, uhlelo, ileveli yomsebenzi, ileveli yokwaneliseka, imali engenayo ephuma njalo ngenyanga, inani lesikhathi sokuphila, nokuningi.
Izilinganiso zokweneliseka zikuvumela ukuthi ulandelele kalula izitayela futhi uqondise izimpendulo ezinhle noma ezingezinhle nezindawo ezithile zokwenza ngcono umkhiqizo. Imiyalo yangaphakathi nohlelo inikela ngesilinganiso sokuphendula esiphakeme kunocwaningo lwendabuko lwe-imeyili futhi ikuvumela ukuthi ulinganise i-ROI yokusekelwa okuhle.
Shayela ezigabeni ezithile zomsebenzisi ukuze ubone ukuthi ukwaneliseka kushintsha kanjani ngabantu. Khomba abagqugquzeli bakho futhi uvikele ukukhwabanisa ngaphambi kokuthi kwenzeke. Khuthaza abagqugquzeli ukuthi basakaze igama ngama-tweets.
Impendulo yomsebenzisi w / SmartVote ™
Umbiko we-beta wempendulo yomsebenzisi uyindlela entsha, eqhutshwa yidatha yokuhlunga, ukuhlunga nokubala izibalo ngempendulo ethunyelwe ku-akhawunti yakho. Ihlanganisa idatha kusuka kuwijethi entsha ye-SmartVote ™ nedatha ye-User Insights ukukusiza uthole ukuthi yimiphi imibono ebaluleke kakhulu kumasethi ahlukene wabasebenzisi.
Lokhu kudlulela ngalé kohlelo lwabo lokuvota lwefa ukukunikeza idatha oyidingayo ukuze wenze izinqumo ezihlakaniphile ezizothatha umkhiqizo wakho (nezinombolo zokugcina) ezingeni elilandelayo.
Iwijethi entsha ye-SmartVote ivumela abasebenzisi ukuthi babeke phambili ukuthi yimiphi imibono eshisayo nokuthi imiphi imibono engashisi futhi ikuvumela ukuthi ufinyelele emiphumeleni ebalulekile ngokwezibalo. Hlunga bese uhlela imibono kuyo yonke i-akhawunti yakho - hhayi ngaphakathi kwesithangami esithile. Beka phambili impendulo ngempendulo yomsebenzisi neye-akhawunti.
Ifomu lokuxhumana elisha le-portal yakho yewebhu
Ngenkathi ukufaka iwijethi entsha kusayithi lakho kungakhethwa ngokuphelele, ngesonto elizayo I-UserVoice izongena esikhundleni sefomu lakudala “Lokuxhaswa kwabathintwayo” kwi-portal yakho ye-UserVoice web (subdomain.uservoice.com) nge-Widget Yokuxhumana entsha:
Lezi zici ezintsha sezitholakalela wonke umuntu I-UserVoice ama-akhawunti. Uma usohlelweni oludala lokuphendula kuphela noma lwedesika losizo kuphela, i-UserVoice ingakusiza ukuthi uthuthele i-akhawunti yakho iye kwelinye lamasu abo amasha okuqala ukujabulela yonke i-UserVoice. Ukufaka iwijethi entsha, vakashela izilungiselelo ze-akhawunti yakho noma funda kabanzi ngokusetha iwijethi entsha.
Tags: impendulo yekhasimendeukwesekwa kwamakhasimendeimpendulo yomsebenzisiimibono yomsebenzisiI-UserVoice
Ngithanda umbono wakho wokusebenzisa isistimu yokulandela umkhondo wesiphazamisi ukuze uhlale uxhumene nabantu abasebenzisa ikhodi yakho kepha insizakalo yezwi lomsebenzisi akuyona inketho engcono kakhulu. Ngingathanda ukubona i-plugin ye-WordPress yokulandela umkhondo wesiphazamisi kepha angikayitholi. Ngibheke i-bugzilla evela kubafana base-mozilla futhi ngiyayithanda, kepha angikwazi ukuyifaka ngoba anginakho ukufinyelela kwegobolondo ku-akhawunti yami yokubamba. Okwamanje, ngivivinya i-Mantis etholakala ku-mantisbt.org, kepha anginasiqiniseko ngakho ngoba ikhodi yayo kunzima kimi ukuyiqonda ngakho-ke kunzima ukuyiguqula nokusebenzisa izingqikithi njll. . ULuis
Ngabe kukhona ukulungiselelwa ukuze isigaba 'se-bug' ezansi kwewindi lempendulo sibonise? Akubonisi okwami, futhi ngizizwa sengathi ngiphuthelwa okuthile okusobala kumphathi…
Ungalokothi ukhumbule… ngiyitholile. Namanje angikakwazi ukuthola ukuthi - uma ngifaka imibono emisha yesihloko, kungani ingabonakali esikrinini sami sokuqala, ngemuva kokususa izihloko ezizenzakalelayo…
Sep 19, 2013 ku-1: 53 AM
Kuhle, ngiyabonga ngokwabelana…!